Shaqaada qameedka shahaadaha shahaadada ee sheefka, Shainmail hauberk ee fabrilka ee ku saabsan ee shirkad- ee China Boegger
Chainmail hubka lagu sameeyaa dabka ah ama qiimaha la xiriira. Shaqo kastana wuxuu ku xidhiidha la xidhiidha afar daran kale, mana dhici karo. Shaqaada qiimeedka ee aynu soo sameynay, waxaa ku yaal sameeyo badan oo cusbooyin ah: la'aan, la'aanta, la'aaneyso, la'aanta, Shamiiska gaaban iyo shamiiska dheer. Sida uu doorashadaadaadaada iyo isticmaalkaada, waxaad dooran kartaa waxey ugu wanaagsan. Sidaasoo kale qameedka ee aynu sameynay, waxaa lagu qabtaa xirfadeed iyo bartood. Markaad iska qaado, uma haysati doono dhibaato, waa in uu u baahan inaad u dhacayso ee caawimaad.
Chainmail hubka u badbaada jidhka oo dhanka
L waxbarashada: bilkab, dabka la'aanta, aluminium, anodiyo, titanium, naasas, ii
I xiriirka isku xiriirka: ee ee ee ee ee ee ee uu u dhigtaa.
L shahaadada xiriirka: Yurub 4 ku jira 1.
Daryeelka ee aawadeed ee ee ee uu uu uu uu uheeyo.
Waxyaabaha ee la'aanta: la'aan la'aanta, sleeves oo gaabar, sleeves badeed, sleeve.
Macluumaad dheeraad ah: la xiriira guriga iyo diyaameta.
SS shilka ee kharashka xidhibkaa
Midiba duwga ah oo kale oo kale u dhaqaalaha dhibka
Qamiiso fiican ah. Sidaal walba waa dooran ka hor inta dabooyinka, mid kastana wuxuu ku xidhiidhaa la xidhiidhaa afar daran kale, si uu uu u dhacayso.Dhinacyo
Miisaan ee la xiriirto. Shamiiska luqada alumiiniumka ka sameeyay miisaan oo ku fudud yahay. Markaas sameyso saddex cilidka ah ee boosteedu wuxuu sameyn karaa laabtaaga.
I badbaadada waaweyn. Shamiiska chainmail ee khamiirka iyo xirfada waaweyn karaa jidhkaaga.
Isaga horay iyo guriga. Qaimilka boostada waxaa laga sameyn karaa sink ama la duwsan, kuwaas oo uu uu badbaado.
I caafimaad iyo waxyaabaha. Shamiiska chainmail waxaa looga isticmaali karaa oo kaliya badbaadada, laakiin xittaa xitaa.
Shamiiska chainmail ee sameeyo badan iyo doorasho badan ee uu aqoonsan kartaa waxyaabaha badan ee waxbarashada ah.
I shaqaalaha badbaadada. Shaqooyinka chainmail ayaa ka diyaariyaa saabtida, gacanta iyo jidhka sare seef, wareeyo, geeriyo, hubka dambe, iyo jidhkaaga, haddii weli ay u bixin kartaa dabool buux iyo siman.
Faahfaahinka l. Shamiiska Chainmail waxaa sidoo kale u weyn yahay shaqada nolosha ee ciyaarka nolosha, uu u sameeyso uu u sameeysaa, dhaqaalaha, Dhaqaalaha sirhooyinka, dhaqaalaha Halloween, cosplay, dhaqaar, tiyaatarka ah.
I shaqaalaha kale. Shamiiska Chainmail waxaa sidoo kale looga isticmaalaa hadalka kale, boostada hiwaayada DIY, jimicsiga dhamaane, Abuurka ee guud ama uu kharasho, ama hadal kale oo abuuriyo.
Ka dambe :Mashiin xirfadda bib
Faaxada iyo machadyada jimeeyaha Chainmail
ChainmailWaa la xiriir. Sidilka birka ee la xidhiidhay. Waxay leeyihiin ee uu uu uu uu uu uu uu uu uu uu uu uu uu uu uheeyo. Shamiiska Chainmail waa la hubmeeyo oo aad u la isticmaalaa dunida. Adeegya...
Sidee u dooran karaan hubka xirfadda?
Dibka dabka ee aluminiumaHaddii aad dooneyso ee rabshadDambi xirfadaIyo u isticmaaleysaa dhaqaalaha, waa doorashada ugu fiican. Aluminium waxaa ku yaal bartood oo fudud ah. Sidoo kale waxaa laga heli ...
NaaChainmailQiimooyin waxaa leh Chainmail Hauberks iyo Chainmail Haubergeons. Iyo reer Rumah iyo reer Rumah iyo iyo qormooyinka dhexdooda, Hubaalka Chainmail waxay mid ka mid ah waxyaalaha ugu qiimeey...
Qayd caafimaad ee warqadaha iyo baagnidooyinka uu geeyo xafiiska ah ee xafiiska ah ee ay ku saabsan.
Qawreed caafimaad ee warqadaha iyo baagnidooyinka ee la siiyay xafiiska.Chainmail hauberkWaxaa lagu qeybsadaa guriga guriga ah xaaladda iyo xaaladda duni. Xaalada guriga waxaa loo qeybsan karaa xarfay...
ChainmailShilka is-qaabiso:1 ee burkaad.Dadka caafimaad iyo koobaha jimicsi ah waa aad u wanaagsan yahay Oh, midibka ka dooran karaa dhar yar, maxaa yeelay, dharku waxay yihiin midibada adag, sidaas d...
Sidee u xidhiidhaa cadowga seefka lafo qaanso?
Lacagta seefka ku yaal cadowda kala duwan waxay isku jeedan karaan kala duwan. Maantadanna waxaannu fiirinayaa sida uu iibsaneyso lafaha.Ciyaar seefkaCiyaarta. Haddii aadan aqoon, waxaa kaa caawiyaa b...